China PVC composite stabilizer mpanamboatra sy mpamatsy |Dehua
Ny sivana molekiola nanampy ny vaovao karazana PVC mitambatra stabilizer manana adsorption tsara kokoa fampisehoana, ary afaka manatsara ny hafotsian'ny PVC vokatra, fanakanana ny fanesorana ny HCl amin'ny PVC vokatra ary manana tena mafy adsorption ny HCL, ka afaka manakana ny catalysis sy ny fahasimban'ny PVC. , ary misy fiantraikany amin'ny fampihenana ny fatran'ny stabilizer, fanatsarana ny fahombiazan'ny fanodinana, ny fanoherana ny toetr'andro, ny fahamarinan-toerana, ary ny fampihenana ny fandaniana sy ny fiantraikany hafa.
Mampiroborobo ny plasticization, manatsara ny endriky ny surface.
Ampitomboy ny fahamarinan'ny stabilizer hafanana.
Ny fanoherana ny toetr'andro ambony.
Plastika tsara, mifanentana tsara, ary manatsara ny endriky ny vokatra.
Ny fifandanjana tsara ao anatiny sy ivelany, ny fanoherana ny toetr'andro maharitra ary ny fiantraikany tsara amin'ny famolavolana.
Fiparitahana tsara, rotsak'orana ambany dia ambany ary fihetsehana matanjaka sy fahaiza-miasa
Ny fotsy voalohany sy ny fahamarinan-toerana mafana, ny fahamarinan-toerana, ny fanosotra tsara ary ny fiantraikany tsy manam-paharoa.
Fifanarahana tsara sy fanaparitahana, ary ny vokatra dia omena amin'ny endrika tsara sy ny fananana intrinsic.
Ny fifandanjana tsara amin'ny lubricant anatiny sy ivelany, ny fluidity mitsonika avo lenta ary manatsara ny fanapoahana tsindry amin'ny hydraulika ny vokatra.
Lubrication rafitra mifototra amin'ny fanafarana lubricant, manatsara ny fluidity ny fitaovana, miaraka amin'ny hafanana tsara fanoherana.
Ny fanoherana ny toetr'andro mahery, ny fanaparitahana tsara, miaraka amin'ny fiantraikan'ny henjana sy ny fampiroboroboana ny fandoroana.
Ny fahaiza-miasa tsara sy ny fluidity plastika, ny fanodinana midadasika ary ny fampiharana matanjaka.
Formula ho an'ny reference: Profiles vokatra
ara-nofo PVC DH-A CPE ACR TiO2 CaCO3 mpanome loko
ilaina 100 4-4.5 8-10 1-2 4-5 10-30 mety
Fomba fanondroana: vokatra fantsona
ara-nofo PVC DH-B CPE ACR TiO2 CaCO3 mpanome loko
ilaina 100 3.8-4.3 2-10 1-2 4-5 15-100 mety
Formula ho an'ny fanondroana: vokatra boards
ilaina 100 3.8-4.3 0-10 1-2 4-5 15-100 mety
Fanamarihana: Ny angon-drakitra etsy ambony dia angon-drakitra andrana refesina amin'ny rheometer. Ary ny vokatra samihafa dia azo aseho amin'ny fitaovana andrana sy ny fomba andrana hafa, ary ny angon-drakitra etsy ambony avy amin'ny orinasanay dia havanana, fa tsy tanteraka.
Ireo angon-drakitra etsy ambony ireo dia angon-drakitra andrana refesina amin'ny rheometery. Ary ny vokatra samihafa dia azo aseho amin'ny fitaovana andrana hafa sy ny fomba andrana, ary ny angon-drakitra etsy ambony avy amin'ny orinasanay dia havanana, fa tsy tanteraka.
teo aloha: PVC Calcium Zinc Stabilizer
Manaraka: Acrylic Impact Modifier (AIM)
Plastic sy fingotra vita amin'ny rano roa singa ...